फिल्म ‘समर लभ’मा‘साया’को भूमिकामा न्यूड सिन दिएकी नायिका रेवती भन्छिन्, ‘नुहाएको दृश्य दिँदा नांगिएको हुन्छ र ?’ — Paschimnews.com News From Nepal
फिल्म ‘समर लभ’मा‘साया’को भूमिकामा न्यूड सिन दिएकी नायिका रेवती भन्छिन्, ‘नुहाएको दृश्य दिँदा नांगिएको हुन्छ र ?’
पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७५/९/२५ गते
लेखक सुविन भट्टराईको उपन्यास ‘समर लभ’मा आधारित फिल्म ‘सभर लभ’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । यस फिल्ममा ‘साया’को भूमिकामा नायिका रेवती रहेकी छिन् भने ‘अतित’ को भूमिकामा आशिष पिया रहेका छन् । यसफिल्म साया र अतीतको प्रेम तथा तड्पाईको कथामा आधारित रहेको छ ।
फिल्मको ट्रेलरमा यस फिल्मकी नायिका रेवती क्षेत्रीको न्यूड सिनको चर्चा बढ्न थालेको छ ।धेरैले यस सिनलाई न्यूड दृश्य भनेका छन् । तर, उनले भो यस कुरामा आपत्ति जनाएकी छन् । उनले पत्रकासँग कुरा गर्दै भनेकी छन्, ‘यहाँ सधैं केटीमाथि मात्र प्रश्न गरिन्छ । एउटी युवतीले बाथटपपमा नुहाएको दृश्य खिच्दा नांगिएको हुन्छ र ? ’
उनले थपिन्, ‘किन, सर्ट खोलेर अभिनय गर्ने केटामाथि प्रश्न उठाइँदैन र, किन केटीलाई मात्र प्रश्न उठाइन्छ ?’आउँदो भ्यालेन्टाइन डेमा प्रदर्शन हुने यो फिल्ममा आशिष पिया, रेवती क्षेत्री, नम्रता सापकोटा, शिसिर भण्डारी, सरोज खनाल मुख्य भुमिकामा रहेका छन् ।रेवती इण्डियाको तर्फबाट मिस इन्टरनेसनल विजेता हुन् ।
आउँदो माघ २५ गतेबाट रिलिज हुने सो चलचित्र लेखक सुविन भट्टराईको उपन्यास ‘समर लभ’मा आधारित भएर निर्माण भएको हो ।यसफिल्मको निर्देशन मुस्कान ढकालले गरेका छन् ।
फिल्ममा सामीप्यराज तिमल्सेनाको पटकथा रहेको छ भने पुष्पन प्रधानको संगीत र फिल्मको संवाद भने लेखक सुबिन र सामीप्यले संयुक्त रूपमा तयार पारेका हुन् । फिल्मका कार्यकारी निर्माता विनोद अधिकारी हुन् ।
यसकारण निराश छिन् दिशा
भारतको प्रधानमन्त्री बन्न चाहान्छिन् प्रियंका चोपडा
प्रेममा परेकोमा मलाई कुनै पछुतो छैन- क्याटरिना
अभिनेता नबनेको भए सलमान के बन्थे? यस्तो छ क्याटरिनाको जवाफ
भद्रगोलको बले र रक्षालाइ ‘टिकटकले डुबायो’ (भिडियो सहित)
‘इन्टाग्राम’ मा खुलिन नायिका नीता ढुङ्गाना (फोटोफिचर)